सन्नी लियोनीले ‘पोर्नस्टार’ बन्नुको भित्री रहस्य खोल्ने, ट्वीटरमा गरिन् यस्तो घोषणा ! – Saurahaonline.com
सन्नी लियोनीले ‘पोर्नस्टार’ बन्नुको भित्री रहस्य खोल्ने, ट्वीटरमा गरिन् यस्तो घोषणा !
मुम्बई, भदौ ४ । पोर्नस्टारबाट बलिउड अभिनेत्री बनेकी सन्नी लियोनीको बायोपिक फिल्म ‘करणजीत कौरः द अन्टोल्ड स्टोरी’ पछिल्ला दिनमा स्ट्रीमिंग प्लेटफर्ममा रिलिज भयो । वेव सिरिजमा बनेको यस फिल्मका लागि दर्शकको राम्रो प्रतिक्रिया पनि मिल्यो । यसैबीच यस बायोपिकलाई लिएर एक ठूलो खुलासा भएको छ ।
सन्नीले ‘करणजीत कौरः द अन्टोल्ड स्टोरी’लाई दास्रो सीजनमा लागने फैसला गरिन् । अब चाँडै नै यस बायोपिकको सीजन २ पनि रिलिज गरिने भएको छ । यस कुराको खुलासा सन्नी लियोनीले आफ्नै इन्स्टाग्राम र ट्वीटरबाट गरिन् ।
तपाईलाई स्मरण होस् कि ‘करणजीत कौरः द अन्टोल्ड स्टोरी’को पहिलो सीजनमा सन्नी लियोनीको बालापनदेखि एडल्ट हुन्जेसम्म जिन्दगीको सबै उतारचढाव सिरिजमा देखाइएको छ । सो सीरिजमा उनको अभिनयलाई लिएर दर्शकले राम्रो प्रतिक्रियासमेत देखाएका थिए ।
सन्नी लियोनी बलिउडमा पाइला राख्नुअघि पोर्न इन्ड्रस्टीकी चर्चित अनुहार हुन् । उनी सन् २०११ मा भारतीय टिभी कार्यक्रम ‘बिग बोस’ को पाँचौ सिजनमा देखिएकी थिइन् । ‘बिग बोस’ पछि उनले महेश भट्टको ‘जिस्म २’मा अभिनय गर्दै बलिउडमा पाइला टेकिन् ।
यसपछि उनले ‘रागिनी एमएमएस–२’ र ‘एक और पहेली लीला’ जस्ता फिल्म गरिन् । अब सन्नी बलिवुड इंडस्ट्रीमा पनि चर्चित कलाकार बनिन् ।
अब सन्नीले ‘करणजीत कौरः द अनटोल्ड स्टोरी’ को दोस्रो सीजनको शूटिंगपछि उनी चाँडै नै साउथ फिल्म ‘वीरमादेवी’ मा देखिने भएकी छन् । यस फिल्ममा उनी योद्धाको भूमिकामा देखिने छिन् ।